Appcelerator Titanium ကို မြန်မာမာ သုံးလို့ရသလား ? — MYSTERY ZILLION
Appcelerator Titanium ကို မြန်မာမာ သုံးလို့ရသလား ?
April 2011 edited April 2011 in Mobile Devlopment
Appcelerator TItanium ကို ရန်ကုန်မှာ သုံးလို့ရလားမသိဘူး။ အချို့တွေက login ဝင်လို့ မရဘူး​ပြောတယ်။ သုံးဘူးတဲ့သူတွေ ရှိရင် သုံးလို့ရ မရ သိချင်ပါတယ်။<div><br></div><div>http://www.appcelerator.com/ က Titanium ကို ပြောတာပါ။</div>